bomitetee - MYSTERY ZILLION
Antemedia Hotspot in ISA Server	NAT function is included in Antamedia Hotspot . No need to use ISA Server.Antamedia software is completly
Comment by bomitetee
ISA SERVER မှာ Cafezee Run ချင်လို့	nothing to do ISA Server and cafezee.
Windows CD ဘယ်လို Burn လဲသိချင်လို့ပါ	when u use windows7, you need to double click on it..and inject Blank CD/DVD.
Chrome.exe	pls use Trojan Remover 6.2 ., after running it and then restart ur computer .
အကြိုက်ဆုံး antivirus ကို vote ပေးကြရအောင်	I like Symantec Cooperation Edition 10.2 ..for windows Vista and7.
adobe reader shortcut error	for me,I open new account in windows7and deleted now using account.
gogle account cannot open in password has problem so, please help me!	pls use Ultrasurf when u open gmail account..
Server	may i haveachance to advise you..
Whatever you use windows server or linux, you can face hardware or software problem and virus .for me, I wish that you use wireless router like linksys cisco and then internet line is more stable than others Comment by bomitetee
ဝင်းဒိုးတင်လို့မရလို့	သိ သ လောက် အ ကြံ ကောင်း ပေး ချင် ပါ တယ်...
၁.CMOS Battery ကို ဖြုတ် ပါ
၂.ပြီရင် PC မှာ တပ် ဆင် ထား တဲ. CDRW or DVD RW... နဲ. cable တွေ ကို checking လုပ် ပါ..ပြီးရင်.BIOS မှာ...CDRW or DVD RW ကို တွေ. မ တွေ. ကြည် ပါ အုံး..တွေ.ရင် ထပ် Install လုပ် ကြည…
ISA 2006 with Dual WAN Load Balancing	Dear Brother..
မြန်မာ့ဟက်ကာ တွေ Georgia အစိုးရရဲ့ ဆိုက်တစ်ခု&	မြန် မာ တွေ ...ရဲ. စိတ် ဓါတ် တွေ အောက် တန်း ကျ ကုန် ပြီ..စိတ် မ ကောင်း ဘူး..လော က မှာ
နှစ် ဦး နှစ် ဘက် စိတ် ချမ်း သာ အောင် လုပ် မှ ..လူ ကောင်း နော်
brb_1984 said:BurmeseHackers ဆိုတဲ့ မြန်မာဟက်ကာအဖွဲ့ ဒီနေ့ Georgia ရဲ့ http://www.moh.gov.ge
Your freedom ဘယ်လိုချိတ်	your freedom ကို install လုပ်ပြီး start connection နှိပ်လိုက်ရာမှာ အောက်ကအတိုင်းပေါ်လာပါတယ်
" Your clients version is rather old and missing the latest features,please upgrade at your earliest convenience."
ANS : Your-Freedom ကို update လ…
IT Technician	အဲ ဒါ ကို ပြာ တာ လို. လညး် ခေါ် ပါ တယ်..:)...:p..
စိတ် မ ဆိုး နဲ. နော် အ နော် နဲ. တူ လို. ပါ
Auto shutdown	information...က သိပ် မ တိ ကျ တော..ပြော လို. မ ရ ဘူး ဗျ
1. Board ရော တက် ရဲ. လား?
notepad.exe အသစ်	အဲ ဒါ က လေ...Kaspersky USB Security Disk software လေး ရှိ နေ ရင် ၀င် လို. တောင် မ ရ ပါ ဘူး.....
၁. msconfig ကို သွား ပြီး ရင် Start up မှာ run နေတာ အရင် ဖြုတ် ပါ ပြီး ရင်..virus ဘယ် နေ ရာမှာ run နေ လည်း ကြည်. ပါ ပြီး ရင်..အဲ ဒီ နေ ရာကို သွား F…
ဘာvirus လဲဗျို ့	ကျွှန်တော် သိ သေ လောက် လေး...ပြော ပြ ခွင့် ပေး ပါ ခင် ဗျာ..
၁.cmd,Taskmanager,regedit,folderoption မ ရ ရင်..အဓိ က ပိတ် တာ...Regedit က ပါ..
၂.Windows Reparing လုပ် ရင် တော. အား လုံး အ ဆင် ပြေ မှာ ပါ..
ဒါ မှ မ ဟုတ် ရင်
၂. virus က cmd,Taskmanager,reg…